Ndị na-ebunye chaja ikuku magnetik na ụlọ ọrụ - ndị na-emepụta chaja ikuku magnetik nke China
Igwe chaja ikuku nwere ike chajịa ngwaọrụ usoro iPhone 13/12 gị, Apple Watch na AirPods n'otu oge, na-ezobe eriri anaghị arụ ọrụ yana chekwaa oghere.
Ọdụdọ chaja ikuku 2-in-1 na-eji teknụzụ njikwa akpaaka kachasị elu. Ejikọtara ya na ọrụ dị iche iche, dị ka ihe na-emebiga ihe ókè, oke ụgwọ, oke ọkụ, oke ọkụ, wdg na ọrụ nchịkwa okpomọkụ, gbanyụọ akpaaka, ihe ndị mba ọzọ na njirimara ihe igwe, wdg. Ya mere ị nwere ike ịnweta chaja ikuku na udo zuru oke.
Nke a bụ chaja ikuku ụgbọ magnetik-magnet, ihe njide ekwentị nwere ike ịtụgharị ogo 360, enwere ike gbanwee ya n'ụzọ dị nro. Ị nwere ike ịhọrọ akụkụ masịrị gị.
Ọ bụ chaja ikuku magnetik multifunction maka iPhone 12, TWSearbud na iWatch. Enwere ọtụtụ nchekwa, dịka ọmụmaatụ, nchebe n'elu ugbu a, nchekwa voltaji, oke okpomọkụ na ọrụ nchọpụta anụ ahụ mba ọzọ, ọ nwere ike igbochi mmebi batrị akụrụngwa site na ịchaji.